Ụlọ ọrụ China Dog Crate Cage na ndị na-eweta ngwaahịa |XINTELI
Nkịta igwe ọla na-enye gị anụ ụlọ ohere nchekwa nke ha iji zuru ike mgbe ị na-anọghị n'ụlọ
Ihe onwunwe: obere carbon ígwè waya
Agba: Nwa, Pink, Blue
Size: 24 '', 30'', 36'', 42', wdg.
Elu: mkpuchi ntụ ntụ ma ọ bụ galvanized
atụmatụ: Eco-friendly, mgbochi nchara, inogide, adigide, siri ike, mfe ọcha, siri ike na inogide
Nkịta nkịta bụ otu n'imeọnụ ụlọ anụ ụlọ.Cages bụ nanị n'ogige atụrụ ma ọ bụ collapse.Ọ dị mfe iji wụnye, ọ dịghị ngwaọrụ mkpa.Sturdy Ọdịdị na-ekwe nkwa gị nwa nkita nchekwa,Agba, size, ngwugwu nwere ike ahaziri.
Emere site na alloy ígwè na-adịgide adịgide na ntụ ntụ nke ejiri nchara na-eguzogide ọgwụ.Ọ dị mfe ịgbakọta na-enweghị ngwaọrụ.Na-enyere aka ijide nkịta ma belata ihe ndọpụ uche nke ọkwọ ụgbọala.Mpempe ala igwe nke mbughari na-enyere aka igbochi nkịta ma belata ndọpụ uche nke ọkwọ ụgbọ ala Ọ dị mfe ịgbakọta na-enweghị ngwaọrụ.
Ọnụ ụzọ abụọ maka oghere ọ bụla, otu n'akụkụ, nke ọzọ n'ihu.
Ọlaigbe nkịtana-enye gị anụ ụlọ ha ohere zuru ike mgbe ị na-anọghị n'ụlọ
Ngwugwu: a. Ya na katọn
b.Na katọn na pallet
Nke gara aga: Razor Barbed Waya
Osote: Igbe igbe igbe hexagonal waya
ọnụ ụlọ anụ ụlọ